Tag: ikike egwuregwu | Martech Zone
Tag: egwuregwu ikike
Monday, April 16, 2018 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Jon Croy
Umuaka umuaka na umuaka nwere obi nkowa site na odida nke Toys 'R' Us, ulo oru ulo oru na uzo ahia ndi ozo nke gbadoro anya na ihe egwuru egwu. Nkwupụta mmechi ụlọ ahịa wepụrụ olileanya niile na nnukwu ụlọ ahịa - ebe agụụ na-agụ ndị nne na nna, alaeze dị ịtụnanya maka ụmụaka - nwere ike ịzọpụta. Ihe dị mwute karịa bụ na a gaara azọpụta Tomụaka 'R' Anyị. Tlọ nnukwu ụlọ a na-egwuri egwu nwere ike ịdaba
Mmasị na-adọrọ mmasị na etu ọgụgụ isi sitere na ebe na-enyere ndị ahịa ụgbọ ala aka
Afọ ole na ole gara aga, agara m ọzụzụ na nkwanye nke enyi m Doug Theis na ịkparịta ụka n'.ntanet. Doug bụ ezigbo netwọkụ m maara na amaara m na ịga ga-akwụ ụgwọ… ọ mere. Ihe m mụtara bụ na ọtụtụ ndị na-emehie nke itinye uru na njikọ kpọmkwem, karịa njikọ na-enweghị isi. Dịka ọmụmaatụ, enwere m ike ịpụ ma gbalịa izute ụlọ ọrụ teknụzụ ahịa ọ bụla iji hụ ma ha